Kalkaaliye korona fayras: "Dalka aan dartii nafteyda halista u geliyay beri wuu i musaafurin karaa" - Tilmaan Media
Maxkamadda ugu sareysa dalka Mareykanka ayaa ka dib u eegeysa kiis halis galin kara kumannaan qof oo iyaga oo carruur ah dalka Maraeykanka ku soo galay sharci daro, kuwaasi oo imika wajihi kara in dalka laga musaafuriyo.
Balse madaxwayne Donold Trump ayaa imika doonaya in sharcigaasi la laalo.
Qaar ka mid ah dadka wajahaya halista ah in dalka laga musaafuriyo waxaa ka mid ah shaqaale caafimaad oo hadda ka mid ah dhakhaatiirta la tacaalaysa cudurka Corona ee faraha ba’an ku haya Mareykanka.
Bilowgii bishii April, gawaari booliis ah ayaa isku gadaamay isbataalka Winston-Salem, ee North Carolina.
Waxay xilligaas booliiska sheegeen inay ahayd mid loogu mahadnaqayay shaqaalaha caafimaadka ee naftooda halista u galiyay daaweynta bukaanada qaba fayraska Covid-19.
Balse Jonathan Vargas Andres, oo ah kalkaaliye ka howlgala qeybta xaaladaha culus ee ICU loo yaqaanno islamarkana la tacaalaya bukaanadda cudurka Corona ayaa waxay arrintan u ahayd farxad aan dhameystirneyn.
Waxaa uu qeybta xaaladaha culus ee ICU ka shaqeynayay afartii sano ee la soo dhaafay.
Jonathan Vargas xaaskiisa iyo walaalkii ayey sidoo kale ay ka wada shaqeeyaan isla goobtaasi, waxayna toddobaadyadii ugu dambeeyay dareemayeen sare u kaca tirada uu soo ritay Covid-19 ee u baahan gargaarka deg-degga ah.
Jonathan ma haysto wax sharci ah, dhowrka toddobaad ee soo socotana wuxuu kala ogaan doonaa in dalka uu naftiisa halista u galiyay uu go’aansan doono in la musaafuriyo iyo in kale.
“Waxaan isku dayay in aanan arrintan ka fikirin sababtoo ah haddii aan in badan ka fikiro daal ayaan dareemaya,” ayuu yiri Jonathan. “Waa in aan arrintan maskaxda ka saaro aniga oo caafimaadkeyga u daneynaya.”
“Waa mid wax walba ka cabsi badan.” Ayuu intaa ku daray.
Jonathan waxaa uu ka mid yahay dadkii ka faa’ideystay sharcigan fursadda siiyay caruurta sida sharci darada ah Mareykanka lagu soo geliyay.
Waxaa sharcigan la ansixiyay xilligii uu madaxwayne Mareykanka ka ahaa Brack Obama ee 2012.
Waxaa uu sharcigan Dreamers Act difaacayaa dadka da’a yarta ah ee iyaga oo carruur ah la geeyay Mareykanka.
Wuxuu sharcigan u ogolaanayay in la siiyo ogolaanshiyo ay wax ku baran karaan kuna shaqeysan karaan.
Jonathan waxaa uu ka yimid dalka Mexico isaga oo ay da’diisu ahayd 12 sano jir.
Sanadkii 2017, madaxwayne Donald Trump ayaa barnaamijkan joojiyay waxaana hadda darsaya maxkamada ugu sareysa dalka Mareykanka.
Wakhati kasta ayuu Jonathan filayaa in loo sheego in uusan xaq u lahayn in uu Mareykanka ka shaqeeya ama ku nooolaado.
Dadka ka faa’ideystay sharcigan Dhiirigalinaya dadka hamiga leh waxaa tiradooda lagu qiyaasay 800,000 oo qof.
Xarunta hormarinta Mareykanka ayaa ku qiyaastay in 29,000 ka mid ah dadkan ay yihiin shaqaale cafimaad oo isugu jira dhakhaatiir, kalkaaliyayaal caafimaad iyo sidoo kale 12,900 oo iyaguna ka shaqeeya qeybaha kale ee caafimaadka.
Jonathan ayaa shaqdiisa ku tilmaamay mid rejo wanaagsan uu ka qabo.
“Xaqiqadii waa mid cabsi leh markaad goobtan ku sugan tahay wax walba oo aad taabato waad ka shakinaysaa,” ayuu yiri.
“Balse cabsidaasi waa in aad meel aad iska dhigtaa sababtoo ah waxaad isbataalka u joogtaa inaad dadka caawiso,” ayuu intaa ku daray.
Jonathan waxaa uu ku dhashay magaalo yar oo ku taalla dalka Mexico, sannadkii 1990.
Aabihii waxaa uu ahaa darawal gaari Bas ah, balse noolashooda way ku filnaan wayday wixii ay halkaas ka heli jireen.
Waxaa uu xusuustaa gurigii ay ku noolaan jireen, ma uusan lahayn dariishad iyo biyo.
Aabihii ayaa markii hore tagay Mareykanka sannadkii 2000, labo sano ka dib ayuu reerkiisa geeyay Mareykanka.
Isaga, walaalkii iyo hooyadii waxay ka soo gudbeen Wabiga u dhaxeeya Mareykanka iyo Mexico iyaga oo aan haysan wax ogolaanshiyo ah.
Tan iyo 2012 dhammaan qoyska waxay ku noolaayeen cabsi, maadaama carruurta aan sharciga haysan ay iskuulada dhigan karaan laakiin aysan jaamacadaha dowladda aadi Karin, jaamacadaha gaarka loo leeyahayna ay aad qaali u yihiin.
Markii uu dugsiga sare dhameeyay waxaa uu bilaabay in uu qabto shaqooyiin yaryar.
“Waxay ahayd isbadal ku yimid nolosha ma aqaan wax kale oo aan ku qeexo,” ayuu yiri Jonathan.
Jonathan ayaa guursaday labo sano ka hor, xaaskiisana waa muwaadin u dhalatay Mareykanka.
Wuxuu hadda isku dayayaa in uusan ka fikirin waxa dhacaya haddii go’aanka uu noqdo in sharciga la laalo.
Waxaa uu sheegay in uu rumeysan yahay in dalka Mexico aad looga qiimeynayo xirfadda kalkaaliye caafimaad, isaga iyo walaalkii na waxay imika ka fikirayaan in ay Canada u wareegaan.